selminaz.com - ibhulogi, izindaba
Posted on 2021-05-26 Izilwane ezifuyiwe zivunyelwe
Ukudla kwama-cichlids: izinhlobo, inani lokondliwa nezindlela
by wpShiya amazwana ku-Food for cichlids: izinhlobo, inani lokondliwa nezindlela
Ake siqale ngomzuzu odabukisayo. Kungcono oqalayo ukugwema ithangi le-cichlid. Kungani? Ngoba lezi zinhlanzi zidinga inani elikhulu le-aquarium, zinolaka impela, kunzima ukuzinakekela. Futhi okubaluleke kakhulu - ukudla kwama-cichlids. Kulula ukuyithenga, kepha ngenxa yobumnandi balokhu ...
Ungayikhetha kanjani i-aquarium: izindlela, izihlungi, ama-compressors, inhlabathi, amathiphu wabaqalayo
by wpShiya amazwana on Ungayikhetha kanjani i-aquarium: izindlela, izihlungi, ama-compressors, inhlabathi, amathiphu wabaqalayo
Ukukhetha i-aquarium yakho yokuqala akulula. Ngempela, isimo sezinhlanzi ezijwayelekile, inhlalakahle yaso nokuthi zizoba yini nenzalo sincike ekutheni isikebhe uqobo lwaso nazo zonke izesekeli ezidingekayo kuso sikhethwe kahle kanjani.
Lo mbhalo uzohlinzeka ngamathiphu we ...
Posted on 2021-05-26 Izesekeli
Amakhadibhodi anamiwe. Incazelo, izinhlobo, izinzuzo
by wpShiya amazwana ekhadibhodini elinamanzi. Incazelo, izinhlobo, izinzuzo
Imboni yamaphepha ihlala ithuthukisa ubuchwepheshe bayo, ikhipha imikhiqizo esezingeni eliphezulu. Le mikhiqizo ifaka ibhodi elinamaminerali, elinesikhundla esiqinile emakethe.
Amakhadibhodi anamiwe uhlobo lwento embozwe ungqimba olukhethekile olubushelelezi olukhulisa izici zalo zekhwalithi.
Kungani ikati lingcwaba ukudla: izimbangela ezingaba khona nokuthi ungakulumula kanjani
by wpShiya amazwana ku Kungani ikati lingcwaba ukudla: izizathu ezingenzeka nokuthi ungamncelisa kanjani
Kungani ikati lingcwaba ukudla? Umbuzo uyamangaza, ngoba lokhu kuziphatha kubhekwa ikakhulukazi ezinjeni. Kepha, njengoba umkhuba ukhombisa, amanye amakati noma amakati azama nje ukungcwaba ukudla kwawo, kepha afihla nesitsha esingenalutho. Ukuziphatha okungajwayelekile kanjalo ekhaya ...
Posted on 2021-05-26 Amaholide
Yikuphi ukuhalalisela uSvetlana ngosuku lwakhe lokuzalwa okungaba?
by wpShiya amazwana on Hlobo luni lokuhalalisela uSvetlana ngosuku lwakhe lokuzalwa?
Uhlala ufuna ukuhalalisela owesifazane ngeholide ngendlela yoqobo futhi enhle, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngesikhumbuzo. Futhi yini engaba eyangempela ukwedlula ukudlala ngegama lakhe embhalweni wokuhalalisela? Umbhalo odwetshwe kusetshenziswa igama uzoshiya ngaphandle kokungabaza ngokuqondiswa kokuhalalisela futhi ...
Posted on 2021-05-26 Ukukhulelwa
Umlomo wesibeletho esithambile ngesikhathi sokukhulelwa: kusho ukuthini?
by wpShiya amazwana kumlomo wesibeletho esithambile ngesikhathi sokukhulelwa: kusho ukuthini?
Ngesikhathi sokukhulelwa, izitho zowesifazane ziba nezinguquko ezinkulu. Ngalesi sikhathi, odokotela basibheka ngokucophelela isimo sikamama okhulelwe. Ukuhlolwa kwabesifazane kwenzeka kabili noma kathathu phakathi nakho konke ukukhulelwa, inqobo nje uma kungekho zifo. Umlomo wesibeletho awuphazamiseki futhi, ngoba ulala kuwo ...
Posted on 2021-05-26 izingane
Ukugeleza kwegazi endleni ezinganeni: izimbangela, izimpawu ezihambisanayo, ukwelashwa, izeluleko ezivela kodokotela bezingane abanolwazi
by wpShiya amazwana ekugelezeni kwegazi endleni ezinganeni: izimbangela, izimpawu ezihambisanayo, ukwelashwa, izeluleko ezivela kodokotela bezingane abanolwazi
Wonke umama onolwazi uyazi ukuthi kufanele kube yini indle osaneni. Uma, lapho ushintsha inabukeni, kukhona ushintsho kumbala wendle noma ukutholakala kwegazi, lokhu kufanele kukwazise abazali. Izimpawu ezinjalo azihlali zikhomba izifo eziyingozi, kepha kungcono hhayi ...
Ukhilimu we-diaper "Mustela": ukubuyekezwa komama
by wpShiya amazwana ku- "Mustela" ukhilimu we-diaper: ukubuyekezwa komama
Namuhla, ukunakekelwa kwabantwana kuhilela ukusetshenziswa kwamanabukeni. Kungabonakala sengathi lezi zinguquko kufanele zenze impilo ibe lula kubazali. Kodwa-ke, amanabukeni avame ukudala ukuqubuka kwe-diaper kanye nokusabela okweqile ezinganeni. Lokhu kuphoqa abazali ukuthi bakhethe ngokucophelela ukhilimu we-diaper. Kulokhu …
Ukukhula kwe-HCG ngezinsuku ngemuva kokufakwa: izici, izinkambiso nezincomo
by wpShiya amazwana ekukhuleni kwe-HCG ngezinsuku ngemuva kokufakwa: izici, izinkambiso nezincomo
Abesifazane abafuna ukukhulelwa bazi kahle kakhulu ukuthi yini i-chorionic gonadotropin (hCG noma i-hCG). Le hormone iqala ukukhiqizwa ngokushesha ngemuva kokukhulelwa okuphumelelayo. Ukukhula kwe-HCG nge ngemuva kwezinsuku Ukufakelwa kukuvumela ukuthi ulandelele inkambo yokukhulelwa.
I-hormone ikhiqizwa yizicubu zezakhiwo zombungu. Izinga lakhe ...
Umtholampilo wezilwane "Big Dipper" e-Izhevsk. Incazelo, izibuyekezo
by wpShiya amazwana emtholampilo wezilwane "Big Dipper" e-Izhevsk. Incazelo, izibuyekezo
Ukukhetha umtholampilo nodokotela wesilwane sakhe, umnikazi onakekelayo ulahlekile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezinsizakalo zezilwane. Izindlela zokukhetha eziyinhloko yilezi: izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe nobungako bamanani entengo. Ukukhetha okwenziwe okungalungile kungadla impilo nempilo yesilwane. Izibuyekezo mayelana umtholampilo wezilwane “Kukhulu ...
"I-Stronghold" yezinja: ukubuyekezwa, imiyalo yokusetshenziswa, imithamo
by wpShiya amazwana ku- "Stronghold" yezinja: ukubuyekezwa, imiyalo yokusetshenziswa, imithamo
Abanikazi bezinja abanakile ngokungangabazeki bazama ukwenza impilo yesilwane sabo abasithandayo ibe yinde futhi ikhululeke ngangokunokwenzeka. Kepha kuvamile ukuthi izilwane ngezikhathi ezithile zitheleleke ngama-parasites ahlukahlukene lapho zihamba futhi zihlangana nezinye izilwane ezifuywayo. Amaconsi "Stronghold" ajwayelekile kubanikazi abaningi, bavame ukwelulekwa ukuthi basebenzise odokotela bezilwane. ...
I-Snot enganeni enenyanga: yini okufanele uyenze?
by wpShiya amazwana ku-Snot enganeni enenyanga: yini okufanele uyenze?
Njalo umama onothando uyayinakekela ingane yakhe futhi azame ukuyivikela kuzo zonke izinkathazo namashwa. Kodwa-ke, akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukuvikela ingane kuma-virus, izifo kanye nama-allergen. Imvamisa ingane iba ne-snot. Umcabango wokuqala ovela komama abasebancane: ...
Owesifazane okhulelwe angaphakamisa amakhilo amangaki: izincomo
by wpShiya amazwana Owesifazane okhulelwe angaphakamisa amakhilo amangaki: izincomo
Ngesikhathi sokukhulelwa, owesifazane kufanele angacabangi ngaye kuphela, kodwa futhi nangomntwana wakhe ohlala kuye. Yingakho eminye imikhawulo ivela empilweni, kufanele ibhekwe. Ake sithole ukuthi mangaki ama-kg owesifazane okhulelwe angakwazi ukuphakamisa nokuthi angakwenza kanjani kahle ...
Ukusatshalaliswa kokufakelwa kwe-IVF eTula: izici, izinsizakalo kanye nokubuyekezwa
by wpShiya amazwana ekusetshenzisweni kwe-IVF kokufakelwa eTula: izici, izinsizakalo nezibuyekezo
In vitro fertilization, noma, njengoba ibizwa kanjalo, IVF, ukukhulelwa kweqanda, okwenziwa ngaphandle komzimba wowesifazane. Namuhla kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokunqoba ukungabi nenzalo emhlabeni.
Ngenxa yokukhiqizwa okuphezulu namasu okuqhubeka, kanye nemishini yesimanje, kwenzeka ukwenza inqubo ...
Enkulisa "Goldfish", Kazan: ikheli kanye nokubuyekezwa
by wpShiya amazwana enkulisa "Goldfish", Kazan: ikheli nokubuyekezwa
Kungekudala, emindenini yonke lapho kunezingane, kwenzeka umcimbi obalulekile wabazali nengane - ukungena enkulisa. Futhi lapha kuphakama imibuzo eminingi: kufanele unikeze ingane yakho eminyakeni emingaki, futhi kungcono yini ukuyishiya ...
Kungenzeka yini ukufudumeza ubisi ku-microwave: inqubo, izeluleko, ukubuyekezwa
by wpShiya amazwana ku Kungenzeka yini ukufudumeza ubisi ku-microwave: inqubo, izeluleko, ukubuyekezwa
Akekho umama ofuna ukunika ingane yakhe ukudla okubandayo. Ngakho-ke, i-oven microwave iyasiza. Amasobho, izitsha eziseceleni, inyama nokunye ukudla okulungile kuyashiswa kuwo. Kodwa-ke, ingabe ubisi lungashiswa kwi-microwave? Ngemuva kwakho konke, kusuka endulo bekufudunyezwa eziko ...
Kungenzeka yini ukwenza i-tattoo yamashiya kwabesifazane abakhulelwe: iseluleko sochwepheshe
by wpShiya amazwana ku Ngabe kungenzeka yini ukwenza ishiya tattoo kwabesifazane abakhulelwe: iseluleko sochwepheshe
Owesifazane uhlala efuna ukubukeka emuhle, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa. Abesifazane abaningi abathandi ukubukeka kwabo okushintsha ngokushesha, isimo esiyindilinga nesimo sesikhumba. Imvamisa, lokhu kungenxa yokuvinjelwa kodokotela ngezinqubo ezijwayelekile, okuphikisanayo okuthakazelisayo ...
Usayizi wengane 110: ilungele iminyaka emingaki?
by wpShiya amazwana ngosayizi Wezingane 110, ilungele iminyaka emingaki?
Lapho bethengela ingane yabo izingubo, kungekudala abazali babhekene nokunquma ubukhulu bezinto. Uma ebuntwaneni yonke into ibilula impela: kulinganiswa ukuphakama kwengane noma kumane nje kwaqanjwa iminyaka yobudala - futhi abathengisi bazokhetha izinketho ezifanelekile, lapho ingane ikhula, kuba nzima kakhulu ukunquma ...
Izindlela zokwelashwa kwezimpawu zokwehlisa ngesikhathi sokukhulelwa: ukubuyekezwa. Isilinganiso samakhambi amahle kakhulu wezimpawu zokwelula
by wpShiya amazwana kuma-Remedies for stretch marks ngenkathi ukhulelwe: ukubuyekezwa. Isilinganiso samakhambi angcono kakhulu wamamaki wokulula
Isikhathi sokukhulelwa sihambisana nezinguquko eziningi emzimbeni wowesifazane. Ukwakhiwa kabusha okukhulu komzimba kuyenzeka, okusho ukuthi kunezinguquko ezithile ekubukekeni. Inkinga abesifazane abaningi ababhekana nayo ngenkathi bephethe ingane ama-stretch mark. Kwabanye, baziveza ngokugqamile, kwabanye ...
Isimo sobuntwana: ukuhlukaniswa, izici, izici
by wpShiya amazwana Isimo sengqondo sezingane: ukuhlukaniswa, izici, izici
Zonke izingane zikhula ngokohlelo olulodwa futhi ziyafana nje kuphela. Omunye ukhula ezolile futhi enesibindi, omunye uyaganga, owesithathu yilowo abakhuluma ngaye "ngomphefumulo wenkampani", kanti owesine uzizwa ekhululekile eyedwa. Ngisho namawele ahlukile ekuziphatheni kwawo, ...
Amafutha abicah nge-fluoroplastic "MS Sport": inhloso, ukwakheka, izici
by wpShiya amazwana kumafutha abicah nge-fluoroplastic "MS Sport": inhloso, ukwakheka, izici
Amafutha abicah emakethe yesimanje yasekhaya athengiswa ezinhlotsheni eziningi. Ngasikhathi sinye, izinkampani eziningi, zombili ezaseRussia nezakwamanye amazwe, zibandakanyeka ekukhishweni kwalezo zimali. Ukubuyekezwa okuhle kakhulu okuvela kubathengi bekufanele, ngokwesibonelo, yi-MS Sport silicone grease ene-fluoroplastic.
Ikhipha lokhu ...
I-non-stick Teflon mat - izici zohlelo lokusebenza, izinzuzo
by wpShiya amazwana ku-Non-stick Teflon Mat - Izici zohlelo lokusebenza, Izinzuzo
Wonke umama wekhaya okungenani kanye empilweni yakhe wabhekana nesimo lapho, lapho kubhakwa, ngokwesibonelo, uphaya we-apula, kwaba nezinkinga ngokususa isitsha esiphelile esikhuntwini. Manje le nkinga kulula ukuyixazulula. Futhi umata okhethekile ongeyona induku uzokusiza ...
Ungakhulisa Kanjani Onqobayo, Noma Yiziphi Izigaba?
by wpShiya amazwana on Ungakhula kanjani onqobayo, noma yiziphi izigaba?
Yini ethonya ukwakheka kwezimfanelo zobuholi enganeni? Isiphi isikhungo semfundo esizokufundisa ukunqoba kukho konke? Ngabe othisha banentshisekelo yokuthi ingane iye emibuthanweni nasezigabeni ezingaphandle kwamahora okufunda? Impendulo ilula kakhulu kunalokho okukholelwa kakhulu.
Ngubani ozosiza ekukhetheni?
Okufanele ngikwenze ...
by wpShiya amazwana ku-DIY rose headband
Ibhande lekhanda elinomusa futhi elibucayi, elihlotshiswe ngama-roses, lizokwenza owesifazane abukeke enothando ngokwengeziwe. Esigabeni se-master esingezansi, sizokukhombisa ukuthi ungalwenza kanjani ucezu lobucwebe. Ama-DIY rose headbands kulula kakhulu ukwenza. Umkhiqizo uhlotshiswe ngama-roses ayi-19 nokhonkolo owenziwe nge-satin ...
Ungalithuthukisa kanjani ikhwalithi leqanda ngaphambi kwe-IVF: izindlela ezisebenzayo nezincomo
by wpShiya amazwana on Ungalithuthukisa kanjani ikhwalithi yeqanda ngaphambi kwe-IVF: izindlela ezisebenzayo nezincomo
Ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuzala, abantu abaningi bathola ithuba lokuba ngabazali. IVF ingenye yezinqubo ezithandwa kakhulu futhi eziphumelelayo. Kepha ukuvundiswa kwe-in vitro akuhlali kunikeza imiphumela oyifunayo. Isizathu salokhu imvamisa ikhwalithi ephansi yezinto eziphilayo - iqanda. Yingakho ke …
Umcamelo wezinhlanzi woqobo: ukuphumula, ukudlala nokucindezeleka
by wpShiya amazwana kumcamelo wezinhlanzi zoqobo: ukuphumula, ukudlala nokudambisa ukucindezeleka
Abantu besikhathi samanje, ikakhulukazi abantu basemadolobheni, bahlala besenkingeni. Baphoqeleka ukuxazulula izinkinga zansuku zonke, cabanga ngobunzima emndenini nasemsebenzini, bawela emjikelezweni wokuhlanya wemithwalo yemfanelo. Inhlanzi ebukekayo yomcamelo-ithoyizi izosiza ekunciphiseni kancane isimo esicindezelayo futhi ihlobise ingaphakathi: ngangokunokwenzeka ...
I-geophagus enekhanda elibomvu: igama, incazelo enesithombe, ukuzalanisa, izici zesondlo, imithetho yokunakekelwa nokondliwa
by wpShiya amazwana ku-geophagus enekhanda elibomvu: igama, incazelo enesithombe, ukuzalanisa, izici zesondlo, imithetho yokunakekelwa nokondliwa
Akuwona wonke umuntu wasemanzini onolwazi owazi ngenhlanzi efana negeophagus enekhanda elibomvu. Abaqalayo abasanda kuthola i-aquarium futhi bathanda ama-guppies alula kakhulu, izinkemba nezinsimbi, imvamisa abakazwanga nangaye. Kepha lokhu kuhle kakhulu futhi kuyathakazelisa ...
Ikhasethi lekhasethi: incazelo, isithombe, ubukhulu, inhloso kanye nenqubo yokusebenza
by wpShiya amazwana kwikhasethi leTape: incazelo, isithombe, ubukhulu, inhloso nomgomo wokusebenza
Ngokufika kokuqoshwa komsindo wedijithali, ikhasethi lekhasethi, njengezihlobo zalo (amadiski anamarekhodi e-vinyl), ngokushesha laphenduka izithombe zesitayela, elahlekelwe yincazelo yalo yasekuqaleni. Masingayibhali bese siyathola ukuthi yenziwe ngani nokuthi ibinjani ...
Izibhedlela zokubeletha ezihamba phambili e-Ufa ngo-2018
by wpShiya amazwana ezibhedlela ezihamba phambili zokubeletha e-Ufa ngo-2018
Usuku lokuzalwa kwengane luyisikhathi esijabulisayo nesithinta impilo yanoma imuphi umndeni. Kungakho omama abalindele besaba ngokwesaba kwesibhedlela abakhulelwe. Kungenzeka ukuthi kube lula ukukhethwa kwabazali besikhathi esizayo ngenxa yesilinganiso, esibala izibhedlela zokubeletha ezihamba phambili e-Ufa, amakheli eminyango nemibandela ...
Ukukhweza ifoni kazibuthe: incazelo nezici
by wpShiya amazwana entabeni yocingo lweMagnetic: incazelo nezici
Ukuhamba yigama eliyisihluthulelo kubantu ngekhulu lama-XNUMX. Izakhamizi ziyakujabulela ukusebenzisa izimoto zakho kanye namagajethi amaningi, futhi i-smartphone ingagcina impilo yonke! Ukuthi nje ngenkathi ushayela, ubuka amavidiyo ahlekisayo noma ufuna ithrekhi yakho oyithandayo akuvunyelwe ngumthetho: izandla ziyadingeka ...
ikhasi 1 ikhasi 2 ... ikhasi 675 Ikhasi Elilandelayo
Amphibious Theme by IsifanekisoPocket ⋅ Inikezwe amandla yi WordPress